आकाश माथि छ कि छैन? , विश्वव्यापी चर्च अफ भगवान स्विजरल्याण्ड (WKG)
आकाश माथि छ - हैन?
तपाईको मृत्यु भएको लगत्तै तपाईले आफूलाई स्वर्गको ढोकाको अगाडि लाममा भेट्नुहुनेछ, जहाँ सेन्ट पिटर तपाईका लागि केही प्रश्नहरूको प्रतिक्षा गर्दै थिए। यदि तपाईं तब योग्य ठानिनुभयो भने, तपाईंलाई प्रवेश दिइनेछ र, सेतो वस्त्र र अनिवार्य वीणाले सुसज्जित हुनुहुन्छ भने, तपाईंलाई बाक्लो बादल तर्फ तपाईंले प्रयासरत हुनेछ। र जब तपाईं तारहरू लिनुहुन्छ, तपाईं आफ्ना केहि साथीहरूलाई चिन्न सक्नुहुन्छ (तर सम्भवतः धेरै को लागि आशा को रूप मा छैन); तर सम्भवतः धेरैले तपाईंले आफ्नो जीवनकालमा जोगिन रुचाउनुभयो। त्यसोभए तपाईको अनन्त जीवन कसरी सुरु हुन्छ।
तपाई सायद यो कुरामा गम्भीर रूपमा विश्वास गर्नुहुन्न। भाग्यवस, तपाइँले यसलाई पनि विश्वास गर्नुपर्दैन, किनभने यो सत्यसँग मेल खाँदैन। तर तपाईं स्वर्ग कसरी कल्पना गर्नुहुन्छ? हामीमध्ये धेरै जसो परमेश्वरमा विश्वास गर्दछौं र मृत्यु पछि पनि कुनै पनि जीवनमा विश्वास गर्दछौं जसमा हामी हाम्रो विश्वासयोग्यताका लागि पुरस्कृत हुन्छौं वा हाम्रा पापहरूका लागि दण्डित हुन्छौं। यति निश्चित छ कि येशू हाम्रो नजिक आउनुभयो; त्यसैले गर्दा उहाँ हाम्रो लागि मर्नुभयो, र यही कारणले उहाँ हाम्रो लागि जीवित हुनुहुन्छ। तथाकथित सुनौलो नियमले हामीलाई सम्झना गराउँदछ: "... त्यसैले परमेश्वरले संसारलाई माया गर्नुभयो कि उहाँले आफ्ना एकमात्र पुत्रलाई दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने सबै हराउनेछन, तर अनन्त जीवन पाउँदछन्"। (यूहन्ना १:3,16:१)
तर यसको मतलब के हो? यदि धर्मीहरूको ज्याला प्रख्यात चित्रको नजिक पनि छ भने, हामीले अर्को स्थानलाई पनि राम्ररी हेर्नु पर्छ - राम्रो, हामी यसलाई स्वीकार गर्न चाहँदैनौं।
आकाशको बारेमा सोच्दै
यो लेख तपाइँलाई पूर्ण नयाँ तरीकाले आकाशको बारे सोच्न प्रोत्साहित गर्नको लागि हो। हामी कट्टर नहुनुलाई ठूलो महत्त्व दिन्छौं; त्यो मूर्ख र अहंकारी हुनेछ। हाम्रो जानकारीको भरपर्दो स्रोत बाइबल हो, र यो स्वर्गमा के आशा गरिन्छ भनेर आश्चर्यजनक रूपले अस्पष्ट छ। यद्यपि धर्मशास्त्रले हामीलाई वाचा गर्दछ कि परमेश्वरमाथिको हाम्रो भरोसाले हामीलाई यस जीवनमा दुबै दिनेछ (यसका सबै चुनौतीहरूका साथ) साथै भविष्यको विश्वमा। येशूले यो कुरा स्पष्ट पार्नुभयो। यद्यपि भविष्यको संसार कस्तो देखिनेछ भनेर उहाँ कम कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो (मार्क १०: २ -10,29 --30०)
प्रेरित पावलले लेखे: "अब हामी केवल अस्पष्ट तस्वीर देख्छौं बादल दर्पण जस्तै ..." (१ कोरिन्थी १ 1:१२, गुड न्यूज बाइबल)। पावल स्वर्गमा “आगन्तुक भिसा” दिइएका थोरै व्यक्तिहरूमध्येका एक थिए र उनलाई के भयो भनेर वर्णन गर्न उनलाई गाह्रो लाग्यो (२ कोरिन्थी १२: २-।) जेसुकै भए पनि, उसलाई आफ्नो जीवन पुनर्स्थापित गर्न पर्याप्त प्रभावशाली थियो। ऊ मृत्युदेखि डराएन। उसले भविष्यको विश्वको प्रशस्त मात्रामा हेरीरहेको थियो र खुशीको साथ यसको लागि तत्पर रहेको थियो। धेरै जसो हामीहरू पावल जस्तो छैनौं।
सधैं खुला छ?
जब हामी स्वर्गको बारेमा सोच्छौं, हामी यसलाई केवल कल्पना गर्न सक्छौं कि हाम्रो वर्तमान ज्ञानको स्तरले अनुमति दिन्छ। उदाहरण को लागी, मध्य युगका चित्रकारहरूले स्वर्गको पूर्ण पार्थिव चित्र रंग्यो जुन उनीहरूले आफ्नो zeitgeist, शारीरिक सुन्दरता र पूर्णताका विशेषताहरूको साथ डिजाइन गरेका थिए। (एउटाले सोध्नु पर्छ, पृथ्वीमा कहाँ राख्ने सल्लाह आयो, जुन ना bare्गो, वायुगतिकीय हिसाबले अत्यधिक सम्भाव्य रूपमा डिजाइन गरिएका बच्चाहरू जस्तै थियो।) स्टाइलहरू स्थिर परिवर्तनको अधीनमा छन्, जस्तै टेक्नोलोजी र स्वाद, र यसैले मध्यकालीन विचारहरू। आजको प्रमोदवन भने धेरै टाढा जान सक्दैन यदि हामी भविष्यको संसारको कल्पना गर्न चाहन्छौं भने।
आधुनिक लेखकहरूले अधिक समकालीन छविहरू प्रयोग गर्छन्। सीएस लुईस काल्पनिक क्लासिक महान तलाक (महान तलाक) नरक बाट काल्पनिक बस यात्रा वर्णन गर्दछ (जुन उसले विशाल, उजाड उपनगरको रूपमा देख्छ) आकाशमा। यस यात्रा को उद्देश्य "नरक" मा आफ्नो दिमाग बदल्ने अवसर दिनु हो। लुइसको स्वर्गले केही लिन्छ, यद्यपि धेरै पापीहरू प्रारम्भिक योग्यता पछि यसलाई मनपर्दैन र तिनीहरूलाई थाहा भएको नरक मन पराउँछन्। लुइस जोड दिन्छन् कि उनले अनन्त जीवनको प्रकृति र प्रकृतिमा कुनै विशेष अन्तरदृष्टि दिएका छैनन्; उनको पुस्तक विशुद्ध रूपात्मक छ।
मिच एल्बोनको आकर्षक काम पाँच व्यक्ति तपाईंले स्वर्गमा भेट्नुभयो (ईन्जी।: पाँच व्यक्तिहरू तपाईं स्वर्गमा भेट्नुहुन्छ) ईश्वरशास्त्रीय शुद्धताको लागि कुनै दाबी गर्दैन। उसको साथ, आकाश समुद्रको एक मनोरञ्जन पार्कमा फेला पर्‍यो, जहाँ मुख्य चरित्रले आफ्नो जीवनभर काम गर्यो। तर एल्बोन, लुइस, र उनीहरू जस्ता अन्य लेखकहरूले तल्लो रेखा चिन्न सके। हुनसक्छ आकाश यतिबिघ्न भिन्न छ जुन हामी यहाँ यस संसारमा जान्दछौं। जब येशू परमेश्वरको राज्यको बारेमा बोल्नुहुन्थ्यो, उहाँ प्राय: जीवनको तुलना गर्नुहुन्छ जुन हामी यो विवरणमा जान्दछौं। यो उस्तै उस्तै छैन, तर ऊसँग यस्तै छ कि उस्तै समानताहरू उसले आकर्षित गर्न सक्छ।
मानव इतिहासको प्रायः ब्रह्माण्डको प्रकृतिको बारेमा थोरै वैज्ञानिक ज्ञान रहेको छ। यदि तपाईले यस्तै कुनै कुराको बारेमा सोच्नुहुन्छ भने, तपाई विश्वास गर्नुहुन्छ कि पृथ्वी एक डिस्क छ जुन सूर्य र चन्द्रमाले घेरिएको थियो एकदम उत्तम गाँसिएको घेरामा। स्वर्ग कतै माथि थियो भनेर विश्वास गरिएको थियो, जबकि नरक भूमिगत थियो। स्वर्गको ढोका, वीणा, सेतो वस्त्र, एन्जिल पखेटा र कहिल्यै न समाप्त हुने प्रशंसाका परम्परागत विचारहरू हामीले बाइबलको सानो व्याख्या गर्ने स्वर्गको बारेमा व्याख्या गर्ने संसारका ज्ञानहरूसँग मिल्दोजुल्दो बाइबलका विशेषज्ञहरूको अनुमोदनको अपेक्षालाई मिल्दछ।
आज हामीसँग ब्रह्माण्डको बारेमा धेरै नै खगोल सम्बन्धी ज्ञान छ। त्यसकारण हामी जान्दछौं कि पृथ्वी अहिलेको विस्तार हुने ब्रह्माण्डको अथाह विशाल विशाल दृश्यमा मात्र एउटा सानो दृश्य हो। हामीलाई थाहा छ कि हामीलाई मूर्त वास्तविकता जस्तो देखिन्छ वास्तवमा यस्तो कडा शक्तिले जोडिएको नाजुक ईन्टरवेन गरिएको उर्जा नेटवर्क बाहेक अरू केहि छैन जुन मानव इतिहासको अधिकांशले यसको अस्तित्वलाई शंका पनि गरेको छैन। हामीलाई थाहा छ कि ब्रह्माण्डको लगभग% ०% मा "डार्क मैटर" हुन्छ - जसको बारेमा हामी गणितज्ञहरु संग सिद्धांत गर्न सक्छौं, तर जसलाई हामी देख्न वा मापन गर्न सक्दैनौं।
हामी जान्दछौं कि निर्णायक घटनाहरू जस्तै "समय बित्दै" सापेक्ष छन्। हाम्रो आयामलाई परिभाषित गर्ने आयामहरू पनि (लम्बाई, चौडाई, उचाई र गहिराई) मात्र धेरै जटिल वास्तविकता को दृश्यहरु र बुझ्न योग्य पक्षहरु हुन्। केही खगोल भौतिक विज्ञहरूले हामीलाई भन्दछन् कि त्यहाँ कम्तिमा सात अन्य आयामहरू हुन सक्छन्, तर कार्य मोड हाम्रो लागि अकल्पनीय छ। यी वैज्ञानिकहरूले शंका गर्छन् कि ती अतिरिक्त आयामहरू उचाइ, लम्बाई, चौडाई र समय जत्तिकै वास्तविक छन्। तपाईं त्यस्तो स्तरमा हुनुहुन्छ जुन हाम्रो सबैभन्दा बढी संवेदनशील उपकरणहरूको मापन क्षमता सीमित छ; र हाम्रो बौद्धिकबाट पनि हामी केवल निराश भएर डराए बिना यससँग व्यवहार गर्न सक्दछौं।
विगतका दशकहरु को ग्राउन्डब्रेकिंग वैज्ञानिक सफलताहरु लगभग सबै क्षेत्रहरु मा ज्ञान को राज्य क्रान्तिकारी छ। त्यसो भए स्वर्गको बारेमा के हुन्छ? के हामीले पछिको जीवनको बारेमा पनि आफ्ना बिचारहरूलाई पुनर्विचार गर्नुपर्दछ?
चाखलाग्दो शब्द - पछाडि यस पक्षमा होईन, यस संसारको होईन। के यो अनौंठो जीवन अझ परिचित वातावरणमा बिताउन र हामीले गर्न चाहेको जस्तै नै गर्न सम्भव हुने थिएन - मानिसहरूलाई हामीले चिनेका शरीरहरूमा हामी जान्दछौं? के यो यो हुन सक्दैन कि मृत्यु पछि जीवन हाम्रो जीवनको सबैभन्दा उत्तम समयको एक विस्तार हो जुन यसको बोझ, डर र पीडाहरूबिना छ? ठिक छ, यस ठाउँमा तपाईंले ध्यानपूर्वक पढ्नुपर्दछ - बाइबलले यस्तो आश्वासन दिँदैन कि त्यो कहिले हुँदैन। (बरु म त्यो फेरि दोहोर्याउनेछु - बाइबलले त्यस्तो गर्दैन भनेर प्रतिज्ञा गर्दैन)।
अमेरिकी ईश्वरविद् र्यान्डी एल्कोर्नले स्वर्गको विषयलाई धेरै वर्षदेखि व्यवहार गरिरहेको छ। उनको पुस्तक स्वर्गमा (स्वर्ग) उसले बाइबलको प्रत्येक भनाइलाई होसियारीपूर्वक जाँच गर्दछ जुन मृत्युपछिको जीवनसँग सम्बन्धित छ। नतिजा मृत्युको पछि जीवन कस्तो देखिन्छ को एक आकर्षक चित्र हो। उनी लेख्छन्:
“हामी आफैंबाट थकित हुन्छौं, हामी अरू, पाप, कष्ट, अपराध र मृत्युबाट थकित हुन्छौं। र अझै हामी पार्थिव जीवन प्रेम, छैन? मलाई मरुभूमिमा रातको आकाशको विशालता मन पर्छ। मलाई फाँसीको प्वालमा नेन्सीको छेउमा आराम गर्न बस्न मन पर्छ, एउटा कम्बल हामीमा फैलिएको थियो, कुकुरले हामीलाई नजिक बनाएको थियो। यी अनुभवहरूले स्वर्गको आशा गर्दैनन्, तर तिनीहरू त्यहाँ के आशा गर्ने स्वाद प्रदान गर्छन्। के हामी यस पार्थिव जीवन को बारे मा प्रेम चीजहरू छन् कि हामी हाम्रो जीवनको लागि बनाइएको मूडमा प्राप्त। हामी यस संसारमा के माया गर्छौं जुन यो जीवनले दिन सक्ने उत्तम कुरा मात्र होइन, यो अझ ठूलो भविष्यको झलक पनि हो। ”त्यसोभए हामीले स्वर्गको राज्यको दृष्टिकोणलाई किन हिजोको विश्व दृश्यमा सीमित गर्नुपर्दछ? हाम्रो वातावरणको ज्ञानमा आधारित, स्वर्गमा जीवन कस्तो देखिन्छ भनेर अनुमान लगाऔं।
प्रेरितहरूको धर्म, मसीहीहरूको बीचमा व्यक्तिगत विश्वासको सबैभन्दा सामान्य गवाही हो, "मरेकाहरूको पुनरुत्थान" को कुरा गर्दछ (शाब्दिक: मासु) तपाईंले मालाची सयौं पटक दोहोर्याउनुभएको हुन सक्छ, तर के तपाईंले कहिल्यै यसको मतलबको बारेमा सोच्नुभएको छ?
सामान्यतया एक पुनरुत्थानसँग सम्बन्धित छ "आत्मिक" शरीर, एक नाजुक, ईथरियल, अवास्तविक कुरा जुन आत्मासँग मिल्दोजुल्दो छ। यद्यपि यो बाइबलीय विचारसँग मेल खाँदैन। बाइबलले बताउँछ कि पुनरुत्थान हुने भौतिक प्राणीहरू हुनेछन्। यद्यपि, शरीर शारीरिक अर्थमा हामी यस शब्दलाई बुझ्ने छैनौं।
हाम्रो शारीरिक विचार को (वा शारीरिकता पनि) चार आयामहरु संग गाँसिएको छ जुनसँग हामी वास्तविकता बुझ्छौं। तर यदि त्यहाँ वास्तवमा अन्य धेरै आयामहरू छन्, हामी भौतिक रूपमा हाम्रो परिभाषा संग गम्भीर गलत छौं।
उनको पुनरुत्थान पछि, येशूको देह शरीर थियो। ऊ खान र हिंड्नको लागि सक्षम थियो र एकदम सामान्य देखियो। तपाईं उसलाई छुन सक्छ। र अझै उसले स्टेशनमा ह्यारी पॉटर जस्ता पर्खालहरू पैदल हिंडेर जानबूझेर हाम्रो वास्तविकताका आयामहरू पार गर्न सक्षम भयो। हामी यसलाई वास्तविक होइन भनेर व्याख्या गर्छौं; तर सायद यो शरीरको लागि पूर्ण सामान्य हो जुन वास्तविकताको सम्पूर्ण स्पेक्ट्रम अनुभव गर्न सक्दछ।
त्यसोभए के हामी मृत्यु, रोग र क्षयको अधीनमा नरहेको वास्तविक शरीरको साथ सम्पन्न अस्वाभाविक जीवनको रूपमा अनन्त जीवनको प्रतीक्षा गर्न सक्छौं, न त यो अस्तित्वमा हावा, खाना, पानी र रगत परिसंचरणमा निर्भर छ? हो, यो वास्तवमा त्यस्तो देखिन्छ। "... हामी के हुनेछौं भनेर अझसम्म खुलाइएको छैन," बाइबल भन्छ। “हामीलाई थाहा छ कि जब यो प्रकट हुन्छ हामी पनि ऊजस्तै हुनेछौं; किनकि हामी उहाँलाई त्यस्तै देख्नेछौं जस्तो उहाँ हुनुहुन्छ " (२ यूहन्ना:: २, ज्युरिख बाइबल)
तपाईंको दिमाग र अर्थको साथ जीवन कल्पना गर्नुहोस् - यसले अझै तपाईंको आफ्नै गुणहरू राख्दछ र अनावश्यक सबै चीजबाट मात्र मुक्त हुन्छ, प्राथमिकताहरूलाई पुनर्व्यवस्थित गर्दछ र यसैले योजना बनाउन सक्छ, सपना देख्दछ र सदाको लागि सृजनात्मक हुन सक्छ। अनन्त कालको कल्पना गर्नुहोस् जसमा तपाईं पुरानो साथीहरूसँग पुनर्मिलन हुनुभयो र अझ धेरै जित्ने अवसर पाउनुभयो। अरूसँग र परमेश्वरसँगको सम्बन्धको कल्पना गर्नुहोस् जुन डर, तनाव वा निराशाबाट मुक्त छन्। कल्पना गर्नुहोस् प्रियजनहरूलाई कहिल्यै बिदाइ नगरी।
अनन्त जीवनको लागि कहिल्यै अन्त नहुने उपासनामा भाग लिनुको सट्टा अनन्त जीवन भनेको यसको भव्यतालाई पार गर्न नसकिने कुराको उदात्तीकरण हो जस्तो देखिन्छ। हाम्रो जीवन हाम्रो सीमित इन्द्रियको साथ बुझ्न भन्दा अधिक हाम्रो लागि होल्डिंग। कहिलेकाँही, भगवानले हामीलाई त्यो विशाल वास्तविकता कस्तो देखिन्छ भनेर एक लुकेको पूर्वावलोकन दिनुहुन्छ। सेन्ट पलले अन्धविश्वासी एथेन्सवासीहरूलाई भने कि परमेश्वर "सबैबाट टाढा हुनुहुन्न ..." (प्रेरित १:: २ 17,24-२27) आकाश पक्कै पनि हामीसँग नाप्ने तरिकामा नजिक छैन। तर यो "सुखी, टाढा देश" पनि हुन सक्दैन। वास्तवमा, उहाँ हाम्रो वरिपरि हुनुहुन्थ्यो जुन हामीले शब्दहरू प्रयोग गर्न सक्दैनौं।
तपाईंको कल्पनालाई केहि समयका लागि जंगली बन्न दिनुहोस्
येशू जन्मनुहुँदा अचानक स्वर्गदूतहरू मैदानमा गोठालाहरूसामु देखा परे (लूका २.2,8-१-14) यस्तो लाग्यो कि उनीहरू आफ्नो संसारबाट बाहिर आउँदैछन्। राजा of:१:2 को पुस्तक २ मा वर्णन गरिएकै कुरा एलीसाको डराउने नोकरलाई भयो जब अचानक एलीशाको फौज उहाँसामु देखा प ?्यो? क्रोधित भीडले उनलाई ढुoned्गाले हानेको ठीक अघि स्तिफनसले बिग्रेको छाप र आवाज पनि खोलिदिए जुन सामान्यतया मानव धारणाभन्दा बाहिरको हुन्छ। (प्रेरित १:: २ 7,55-२56) त्यसोभए के यूहन्नाले प्रकाशको दर्शन देखे?
रेन्डी एल्कोर्नले औंल्याए कि “अन्धाहरूले जस्तै उनीहरूको वरपरको संसार देख्न सक्दैनन्, यद्यपि यो अवस्थित छ, हाम्रो पापीपनको अर्थ हामी आकाश देख्न असमर्थ छौं। के यो सम्भव छ कि पापको पतन हुनु अघि आदम र हव्वाले आज हाम्रो लागि अदृश्य छ भनेर स्पष्टसँग देखेका थिए? के स्वर्गको राज्य हामीबाट केही टाढा रहन सम्भव छ? ” (स्वर्ग, पृ। १178)
यी मनमोहक अनुमानहरू हुन्। तर ती शानदार छैनन्। विज्ञानले देखाएको छ कि सृष्टि हाम्रो वर्तमान शारीरिक सीमितताहरूमा हामीले महसुस गर्न सक्ने भन्दा बढी छ। यो पृथ्वीमा मानव जीवन हामी अन्ततः के हुनेछ को एक सीमित अभिव्यक्ति हो। येशू हामीहरु मध्ये एक जना मानव भएर आउनुभयो र यस प्रकारले मानव अस्तित्वको सीमितताहरुमा प्रस्तुत गर्नुभयो जब सम्म सबै मानव जीवनको मृत्यु हुन्छ - मृत्यु! आफ्नो क्रूसमा टाढा हुनुभन्दा केही समय अघि, उनले प्रार्थना गरे: "हे पिता, संसार सृष्टि हुनुभन्दा अघि मलाई तपाईसँग भएको त्यो महिमा मलाई दिनुहोस्।" र हामीले यो बिर्सनु हुँदैन कि उहाँ आफ्नो प्रार्थनामा जोड दिनुहुन्छ: "हे पिता, तपाईसंग यो छ [ मानिसहरु) मलाई दिईएको छ र म चाहन्छु कि म जहाँ छु मँ उनीहरु संग होस्। उनीहरूले मेरो महिमा देखुन् जुन तपाईंले मलाई दिनुभयो किनभने तपाईंले मलाई संसार बनाउनु अघि माया गर्नुहुन्थ्यो। ” (यूहन्ना १:: and र २,, गुड न्यूज बाइबल)।
नयाँ स्वर्ग र पृथ्वीको प्रतिज्ञाहरूमा "मृत्यु सदाका लागि पराजित हुनेछ" समावेश छ। विकसित संसारमा, हामीले एक दशक वा दुई भन्दा लामो जीवन कसरी बाँच्ने भनेर पत्ता लगाउन व्यवस्थित गरेका छौं। (दुर्भाग्यवस, हामी यो अतिरिक्त समय कसरी प्रयोग गर्ने भनेर आंकडा गर्न सक्षम भएनौं)। तर यदि यो चिहानबाट अलि लामो समयसम्म उम्कन सम्भव छ भने पनि मृत्यु हाम्रो अपरिहार्य शत्रु हो।
स्वर्गको आफ्नो रोचक अध्ययनमा एल्कोर्नले वर्णन गरे: “हामीले मृत्युको महिमा गर्नु हुँदैन - न त येशू। ऊ मृत्युको निम्ति रोयो (यूहन्ना १:11,35:१) जसरी शान्तिपूर्ण रूपमा सदाको लागि गएका मानिसहरूका बारेमा सुन्दर कथाहरू छन्, त्यस्तै कथाहरू पनि छन् जुन मानसिक र शारीरिक रूपमा क्षय गर्ने, भ्रमित, विचलित भएका व्यक्तिहरू हुन् जसको परिणामस्वरूप मृत्यु थकित, स्तब्ध, शोक ग्रस्त मानिसहरू हुन्। मृत्यु दुख्छ र यो एक शत्रु हो। तर येशूको ज्ञानमा जीवन बिताउनेहरूका लागि, यो अन्तिम पीडा र अन्तिम शत्रु हो " (पी 451)।
प्रतीक्षा गर्नुहोस्! यो जारी छ। , ,
हामी अझ धेरै पक्षहरू हेर्न सक्दछौं। मानौं कि सन्तुलन कायम छ र हामी यस विषयबाट टाढा रहदैनौं, मृत्यु पछि हामीलाई के हुन्छ भनेर अन्वेषण गर्दै अनुसन्धानको रोमाञ्चक क्षेत्र हो। तर मेरो कम्प्युटरको शब्द गणनाले मलाई यो लेख अझै सीमित छ भनेर सम्झना गराउँछ। र ठाउँ विषय हो। त्यसोभए र्यान्डी एल्कोर्नको अन्तिम, साँच्चिकै रमाइलो उद्धरणको साथ अन्त गरौं: "प्रभुसँग हामी प्रेम गर्दछौं र हामीले मन पराउने साथीहरू, हामी सँगै अन्वेषण गर्न र जित्ने शानदार नयाँ ब्रह्माण्डमा अन्तिम हुनेछौं। ठूलो रोमांच खोज्नुहोस्। येशू यी सबैको केन्द्रबिन्दु हुनुहुन्छ, र हामीले सास फेर्ने हावा आनन्दले भरिपूर्ण हुनेछ। र यदि हामीले सोच्दछौं कि वास्तवमा त्यहाँ वृद्धि हुन सक्दैन, हामी ध्यान दिनेछौं - यो हुनेछ! " (पी 457)।
जोन हलफोर्ड द्वारा